Cloud Intelligence Optimizely: Ahoana ny fampiasana motera Stats ho fitsapana fitsapana A / B, ary haingana kokoa | Martech Zone
Talata, Aogositra 24, 2021 Talata, Aogositra 24, 2021 Ryan Lucht
Raha mikasa ny hanao programa fanandramana ianao hanampiana ny fitsapana sy hianaranao ny orinasa, dia misy ny vintana ampiasainao Cloud Cloud Intelligence - na efa nandinika azy farafaharatsiny. Optimizely dia iray amin'ireo fitaovana matanjaka indrindra amin'ny lalao, fa toy ny fitaovana toy izany dia mety hampiasa azy io ianao raha tsy azonao ny fomba fiasany.
Inona no mahatonga an'i Optimizely ho mahery vaika? Ao amin'ny ivon'ny endri-dahatsoratra misy azy no misy ny maotera antontan'isa mahomby indrindra amin'ny fitaovana fahatelo, mamela anao hifantoka bebe kokoa amin'ny fahazoana mivantana fitsapana manan-danja - tsy mila miahiahy ianao fa diso ny fandikanao ny valinao.
Mitovy amin'ny fianarana jamba nentim-paharazana amin'ny fitsaboana, A / B fitiliana hiseho an-kisendrasendra hafa fitsaboana ny tranokalanao amin'ny mpampiasa samihafa mba hampitahana ny fahombiazan'ny fitsaboana tsirairay avy.
Ny statistika dia manampy antsika hanao fehin-kevitra momba ny fahombiazan'ny fitsaboana mandritra ny fotoana maharitra.
Ny ankamaroan'ny fitaovam-panadinana A / B dia miankina amin'ny iray amin'ireo karazana inferansa statistika roa: statistikan'ny Frequentist na Bayesian. Ny sekoly tsirairay dia samy manana ny mahatsara sy maharatsy azy - Ny antontan'isa matetika dia mila haben'ny santionany hamboarina alohan'ny hanaovana fanandramana, ary ny antontan'isa Bayesian dia miahy indrindra ny amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara momba ny lalana fa tsy ny famaritana tarehimarika tokana ho an'ny fiatraikany, mba hanomezana ohatra roa. Ny hery lehibe ananan'i Optimizely dia io no hany fitaovana eny an-tsena anio maka a tsara indrindra amin'ny tontolo roa fomba.
Ny valiny farany? Manam-pahombiazana ahafahan'ny mpampiasa mihazakazaka fanandramana haingana kokoa, azo itokisana kokoa ary mora kokoa.
Mba hanararaotana tanteraka an'izany anefa dia ilaina ny mahatakatra ny zava-mitranga ao ambadiky ny seho. Ireto misy fomba fijery 5 sy paikady hahafahanao mampiasa ny fahaizan'i Optimizely toy ny pro.
Paikady # 1: Fantaro fa tsy ny refy rehetra no foronina mitovy
Amin'ny ankamaroan'ny fitaovana fanandramana, ny olana tsy dia raharahian'ny olona matetika dia ny arakaraky ny ampidirinao ny metrika ho fizahan-toetra ny fitsapanao, ny mety hahitanao fehin-kevitra diso noho ny kisendrasendra tampoka (amin'ny antontan'isa dia antsoina hoe "olana sedra marobe ”). Mba hitazomana ny valiny azo itokisana, Optimizely dia mampiasa andiana fanaraha-maso sy fanitsiana mba hitazomana ny faran'ny tranga faran'izay ambany azo atao.
Ireo fanaraha-maso sy fanitsiana ireo dia misy fiantraikany roa rehefa manangana fitsapana amin'ny Optimizely ianao. Voalohany, ny metrika tendrenao ho anao Metrika voalohany hahatratra ny lanjan'ny statistika haingana, ny zavatra hafa rehetra tsy miova. Faharoa, arakaraka ny anombohanao ny mari-pahaizana amin'ny fanandramana dia arakaraka ny haharetan'ny metatrao any aoriana vao hahatratra ny lanjan'ny statistika.
Rehefa manomana andrana dia alao antoka fa fantatrao hoe inona ny metrika ho tena Avaranao amin'ny fanapahan-kevitrao, ataovy izay metrika ho an'ny Kilongao. Avy eo, tazomy ny ambin'ny lisitr'ireo metrikao amin'ny alàlan'ny fanesorana na inona na inona mihoatra loatra na azo tsapain-tanana.
Paikady # 2: Manamboara toetranao manokana
Optimizely dia tsara amin'ny fanomezana anao fomba mahaliana sy manampy maro mba hampizarazara ny valin'ny andrana. Ohatra, azonao atao ny mandinika raha misy fitsaboana sasany mahomby kokoa amin'ny birao vs. finday, na mandinika ny tsy fitovizan'ny loharanom-pifamoivoizana. Rehefa matotra anefa ny programa fanandramana ataonao dia maniry haingana ny fizarana vaovao ianao - ireo dia mety ho an'ny fampiasana anao manokana, toy ny fizarana ho an'ny fotoana iray vs. fividianana famandrihana, na amin'ny ankapobeny toy ny "mpitsidika vaovao vs. miverina mody" (izay, Tsoriko fa mbola tsy azontsika fantarina hoe maninona no tsy omena ao anaty boaty izany.
Paikady # 3: Mikaroha Optimizely's Stats Accelerator
Ny fampitaovana fitaovana fitsapana diso tafahoatra matetika dia ny fahaizana mampiasa ny «bandit armes multi-armes», karazana algorithm fianarana ny masinina izay manova be dia be izay nanokanana ny fifamoivoizana mandritra ny andrana iray, handefasana mpitsidika marobe ny "mandresy" fiovana arak'izay azo atao. Ny olana amin'ireo bandy mitam-piadiana maro dia ny tsy valiny azo itokisana amin'ny fahombiazana maharitra ny valiny, ka ny tranga fampiasana ireo karazana andrana ireo dia voafetra ihany amin'ny tranga saropady toa ny fampiroboroboana ny varotra.
Na izany aza, Optimizely dia manana karazana algorithm bandit hafa ho an'ny mpampiasa amin'ny drafitra avo kokoa - Stats Accelerator (fantatra ankehitriny amin'ny safidy "Accelerate Learnings" ao anatin'ny Bandits). Amin'ity fananganana ity, raha tokony hiezaka ny hizara mavitrika ny fifamoivoizana amin'ny fiovana avo indrindra, ny Optimizely kosa dia manokana ny fifamoivoizana amin'ireo fiovana mety hahatratra ny statistika haingana indrindra. Amin'izany dia afaka mianatra haingana ianao, ary mitazona ny famerenana ny valin'ny fitsapana A / B nentim-paharazana.
Paikady # 4: ampio Emojis amin'ny anaranao metrika
Raha vao jerena, ity hevitra ity dia toa tsy mandeha amin'ny laoniny, na tsy mandeha aza. Na izany aza, ny lafiny iray lehibe amin'ny fahazoana antoka fa mamaky ny valin'ny fanandramana marina ianao dia manomboka amin'ny fahazoana antoka fa afaka mahatakatra ilay fanontaniana ny mpihaino anao.
Indraindray na eo aza ny ezaka faran'izay tsara azontsika atao, ny anarana metrika dia mety hanjary hisavoritaka (andraso - mirehitra ve izany metrika izany rehefa ekena ny baiko, na rehefa mahatratra ny pejy misaotra ny mpampiasa?), Na ny andrana iray dia misy metatra marobe izay mihodina sy midina ny valiny pejy dia mitarika ho amin'ny habetsahan'ny kognitive be loatra.
Ny fampidirana emojis amin'ny anaranao metrika (lasibatra, mari-kaja maintso, eny fa na ny kitapom-bola lehibe aza mety handeha) dia mety hiteraka pejy izay maivana kokoa.
Matokia anay - Ho mora kokoa ny hamaky ny valiny.
Paikady # 5: Avereno jerena ny haavonao manan-danja momba ny statistika
Ny valiny dia heverina ho azo antoka amin'ny sehatry ny fanandramana Optimizely rehefa nahatratra azy ireo lanjan'ny statistika. Ny lanjan'ny statistika dia fehezanteny matematika henjana, fa ny tena zava-misy dia ny mety ho fanamarihanao dia valin'ny tena tsy fitoviana misy eo amin'ny mponina roa, fa tsy kisendrasendra fotsiny.
Ny haavon'ny statistikan'i Optimizely izay voalaza fa "manan-kery foana" noho ny hevitra matematika antsoina fitiliana manaraka - Izany dia tena mahatonga azy ireo ho azo itokisana kokoa noho ireo an'ny fitaovana fanandramana hafa, izay mora tohina amin'ny karazana olana "mitsikilo" raha mamaky azy ireo haingana ianao.
Ilaina ny mandinika izay haavon'ny statistika manan-danja izay heverinao ho zava-dehibe amin'ny programa andranao. Raha 95% no fivoriambe ao amin'ny fiarahamonina siantifika, dia manandrana ny fanovana ny tranokala izahay fa tsy ny vaksininy. Safidy iraisana iray hafa eo amin'ny tontolon'ny andrana: 90%. Nefa ve ianao vonona hanaiky tsy fahatokisana bebe kokoa mba hahafahana mihazakazaka fanandramana haingana kokoa sy hitsapana hevitra bebe kokoa? Azonao atao ve ny mampiasa 85% na manan-danja statistika 80% aza? Ny minia mikendry ny fandanjana valisoa atahorana anao dia mety handoa dividends exponential rehefa mandeha ny fotoana, ka diniho tsara izany.
Vakio bebe kokoa momba ny Cloud Optimizely Cloud
Ireto fitsipika sy fomba fijery haingana dimy ireto dia hanampy be dia be ao an-tsaina rehefa mampiasa Optimizely. Toy ny amin'ny fitaovana rehetra, dia ilaina ny manamarina fa manana fahatakarana tsara momba ny fanaingoana ambadiky ny sehatra ianao, amin'izay dia azonao antoka fa mampiasa ny fitaovana amin'ny fomba mahomby sy mahomby ianao. Amin'ireo fahatakarana ireo dia azonao atao ny mahazo valiny azo antoka tadiavinao, rehefa ilainao izany.
Tags: toetratoetra manokanaemojifanandramanamari-pandrefesanaoptimizelyCloud cloud intelligencemetrika voalohanymetrika voalohanyfitiliana manarakalanjan'ny statistikamanafaingana statsfitilianatoetra fanandramanametatra fitsapanafanandramana tranonkala
Alohan'ny hidirana Cro metrics, nanolotra serivisy ara-barotra feno feno izy izay mitantana programa fanandramana mahomby amin'ny maha talen'ny marketing amin'ny Big Interview azy. Ryan dia nitondra mason-tsivana stratejika, fahatakarana lalina momba ny psikolojia ho an'ny mpampiasa, ary famoronana feno hafanam-po amin'ny fanatsarana ny ekipan'ny Cro Metrics.